Muwaadiniin Soomaali ah oo siyaabo kala duwan loogu lagu laayay Koonfur Africa. – SBC
Muwaadiniin Soomaali ah oo siyaabo kala duwan loogu lagu laayay Koonfur Africa.
Ugu yaraan 5 muwadiniin Soomaali ah ayaa isbuucan siyaabo kala duwan loogu dilay dalka Koonfur Africa, waxaa ugu dambeeyey oo habeenimadii xalay geeriyooday labo wiil oo ku dugnaa deegaanka lagu magacaabo Belhar ee magaalada Cape Town.
Abuukar Macalin iyo Daa’uudFfaarax ayaa xiliga dilka loo geystay waxa ay ku socdeen baabuur yar oo ay ku wadeen alaabo ganacsi oo ay ugu tala kaleen dugaanka waa sida uu sheegay Maxamuud oo ay saaxiibo ahaayeen dhalinta geeriyootay.
Booliska ayaa isla markii soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay balse wali ma jiraan cid loo soo qabtay arintan, booliska ayaa sheegay in ay baaritaano sameyn doonaan ayna gacanta ku soo dhigi doonaan gacan ku dhiiglayaasha ifka u qoonsaday dhalinyarada soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa isbuucan allaha u naxariistee ku dhintay duleedka magaalada Port Elizabeth labo marxuum oo lagu kala magacaabi jiray Carfaaye iyo Maxamed oo ayagana dabley hubeysan ay ku dileen Tooreey.
Waxaa jiro muwaadin kale oo isla isbuucan lagu dily Cape Town oo magaciisa aan wali la helin oo asna ku dhintay gacanta dabley hubeysan oo aan la garaneyn oo ku weerary goobtiisa ganacsi.
Sidoo kale isbuucan waxaa magaalada johansberg lau aasay muwaadin Soomaaliyeed oo labo bil meyd ahaa oo ku jiray isbitaal, isla markaana la’aqoonsan waayay eheladiisa iyo diintiisa maadaama koonfur afrika inta badan aanan dadka lagu aasin qabuurta wadarta ah inta qofka diintiisa laga aqoonsanayo.
Wali lama oga sida uu ku imaan karo xal laga gaaro in la yareyo dhibka loogeysto muwaadiniinta Soomaalida oo dalka lagu waqlalo isla markaana dilal dhac iyo boob loogu geysto.
Cape Town-Koonfur Afrika.